Olee otú Ọkụ a CD si Youtube - Ọkụ Youtube Music ka CD?
Ga-amasị m dee ụfọdụ-awụ ọsọ n'ugwu si YouTube jidesie a ide CD-R? Bụ nke a ga-ekwe omume na otú ọkụ a cd si youtube music videos? Ekele. -Babyblue
Dị ka nwoke n'elu, e nwere mgbe ị chọrọ ibudata music si YouTube ka CD. Yeah, ọ bụ nnọọ ezi echiche na-ọkacha mmasị gị YouTube music na ọkụ youtube music ka cd, nke mere na i nwere ike ige ha ntị ọzọ conveniently site playback on CD Player wdg
Isure youtube music ka cd na, n'eziokwu, ọ bụ nnọọ mfe karịa ị na-eche. Dị nnọọ chọta a pụrụ ịdabere na ụzọ enyere gị aka download ọkacha mmasị gị YouTube music na mgbe ahụ ọkụ ya n'ime a CD na a smart YouTube ka CD burner. Ya mere, ndị ezigbo nsogbu i nwere ike na-enwe bụ otú iji tọghata music anya YouTube videos. Ke ibuotikọ emi, Aga m akọwa otú ọkụ youtube music ka cd nzọụkwụ site nzọụkwụ.
Ngwọta 1.TunesGo ---- Download Youtube music free na ọkụ cd si youtube
Ngwọta 2.Streaming Audio Recorder ---- ọkụ cd si youtube
1 Olee otú Download Youtube music free?
Ị nwere ike na-ezo aka a nkuzi: Olee otú iji ọkụ youtube ka cd free site TunesGo
2 Olee otú iji ọkụ youtube ka cd?
Ị nwere ike na-ezo aka a nkuzi: Ọkụ Youtube music ka CD
Anyị nwere ike iji a smart Streaming Audio Recorder isure youtube ka cd ma tinye ya na iTunes. Dị ka anyị maara, Apple iTunes nwere ikike nke na-ere ọkụ music ka CD. Ya mere, ebe, m na-eji ya dị ka YouTube CD burner isure YouTube music ka CD. N'okpuru ebe a bụ ihe zuru ezu ndu.
Cheta na: N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere ọzọ YouTube ka CD Ntụgharị ka ị ọkụ nke bibiri YouTube MP3 music ka CD, ị nwekwara ike agbalị ya.
1 Download music si YouTube maka CD ọkụ
Mgbe launching Streaming Audio Recorder, na elu-n'akụkụ aka ekpe nke ya isi interface, dị nnọọ pịa "Record" button iji tọghata music si YouTube. Ọzọ, gaa na YouTube ịhụ na-egwu ọkacha mmasị gị music (gụnyere music videos). Ka anya dị ka egwu na-akpọ, a na ngwa ga-akpaghị aka idekọ ya. Ozugbo ị pịa bọtịnụ ọzọ ma ọ bụ music akwụsị ebre, a ngwa ga-ịkwụsị ndekọ. N'ihi ya, hụ na online YouTube music bụ ike igwu egwu were were.
2 Import YouTube music ka iTunes na ọkụ music on cd
Mgbe ọ mere, na YouTube music ga-echekwa na MP3 format na a na ngwa si n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị arụnyere na Apple iTunes ngwa, e nwere "Tinye ka iTunes" button na ala nke isi interface. Dị nnọọ pịa ya ka ịgbakwunye YouTube music ka iTunes maka CD na-enwu. (Rịba ama na Mac ọrụ dị mkpa iji aka ịdọrọ music ka iTunes.) Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ na music e kwukwara na "SAR" playlist gị iTunes.
3 Malite ka ọkụ YouTube ka CD
Mgbe inserting a ide CD na kọmputa gị, na iTunes, pịa nke a "SAR" playlist, na mgbe ahụ na-aga "File"> "Ọkụ Playlist ka Disc" menu. Na popping-elu window, mkpa ka ị họrọ "Audio CD" maka ihe ọ bụla CD ọkpụkpọ na "MP3 CD" maka MP3-eru CD ọkpụkpọ. N'ezie, ọ bụrụ nnọọ na ị chọrọ Akon elu music, na "Data CD ma ọ bụ DVD" nhọrọ bụ gị nhọrọ. Ke akpatre, pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ YouTube music ka CD. Ọ gwụla.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-iTunes si Apple saịtị.
Extra n'ọnụ: Mgbe ụfọdụ, music nwetara site YouTube nwere ike ọ gaghị zuru ezu ozi dị ka ọkụ egwu, aha, album na nkà na lyrics, otú i nwere ike mkpa Wondershare TidyMyMusic maka Mac na-achọpụta na-efu ọmụma. Na otú ahụ, ị ga-enwe a dozie music n'ọbá akwụkwọ mfe iji hazie. Ị nwere ike iji ngwá ọrụ a iji hazie gị niile music on iTunes na kọmputa gị. Ike na-eche ka a na-agbalị? Download ya n'okpuru na-amalite anwansi music ahụmahụ.
Get a omume na-esonụ Download njikọ na-enye ya a na-agbalị na gị Mac.
Njirimara Comparison ---- music cd ọkụ software
Top 39 Funny Vine Videos ị kwesịrị ị na Miss
> Resource> Video> Olee Ọkụ YouTube Music ka CD